‘Hushumiri hwemabasa mashanu’ -- Izvi zvinorevei nhasi uno?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » ‘Hushumiri hwemabasa mashanu’ -- Izvi zvinorevei nhasi uno?
‘Hushumiri hwemabasa mashanu’ -- Izvi zvinorevei nhasi uno?
Dzidziso yehutungamiri hwekereke yatenderera kwemasunturi mazhinji muzvirevo zvetsika dzevanhu uye mafungiro evanhu (zvinobva pakuita kwevanhu), apo makereke anoedza kugadzirisa matambudziko emumasagano mavo neruzivo rwevanhu. Saka nekufamba kwenguva, nyaya yehutungamiri hwekereke yakabva yabva zvakanyanya kubva pane zvakayorwa pamusoro payo muBhaibheri.
Testamente Yekare yaive nechiprista chaAroni chaive chakasimudzirwa pamusoro peungano yevanhu. Chiprista chakasimudzirwa ichi, chaive chimire pakati paMwari nevanhu, chakagumiswa pakatanga Testamente Itsva. Pakauya Jesu, vanhu vakamuda, asi aive dambudziko kuhutungamiri nechiprista chavo chakasimudzirwa. Murairo wakakundikana nekuda kwemaprista achiJuda akakurudzira vanhu, mumashure mekunge vambopemberera Jesu musi weSvondo yemurara, kuti vakumbire kuuraiwa kwake musi weChishanu chakazotevera.
Ruka 22:2 Vaprista vakuru navanyori vakatsvaka kuti vangamuvuraya sei; nokuti vakanga vachitya vanhu.
Marko 15:11 Zvino vaprista vakuru vakakurudzira vanhu vazhinji, kuti vakumbire kuti zviri nani avasunungurire Barabasi.
Saka chiprista chaiparadza, chakaparadza rudzi rwemaJuda.
Vanhu vanongotevera vatungamiri vakasimudzirwa vasingafungi nezvavo. Kune vatungamiriri vanotonga zvakanyanya vanomanikidza nekuraira kuti vanhu vatenderane nezvavanotenda ivo. Ichi chinhu chakaipa murudzi rwevanhu chine mibairo yakaipa.
Chiprista chakasimudzirwa ‘hushumiri hwemabasa mashanu’
Satani kasingagumi akaedza kwazvo kusika chiprista chakasimudzirwa ‘chehushumiri hwemabasa mashanu’ achichiisa pamusoro peungano yekereke. Nekubudirira kwaakaita pachinhu ichi, Satani akabudirira kwazvo kudzikisira kurudziro yeMagwaro pamusoro pekereke. Kana chimiro chehutungamiri chisiri muMagwaro, saka zvinenge zviri nyore kufuratira mamwe Magwaro asingaitiri kereke ichigamuchira tsika dzakaitwa nevanhu uye mifungo yavo.
Kusimudzirwa kwemunhu mutsvene pamusoro peungano kwaidaidzwa kuti tsika dzavaNikoraiti. Kuita uku kwaive kwakakwanira kwazvo muchimiro chekereke chinodiwa nevanhu sezvo kuchiisa munhu anotungamirira nekufambisa zvinhu mukereke pamusoro pevanhu. Asiwo kune dambudziko nekuti Mwari anovenga kuita uku kwese. Anorumbidza kereke yekutanga yeEfeso pamusoro pekuvenga kusimudzirwa kwehutungamiri hwevanhu.
54-0512 Nguva nomwe dzekereke
..... Chiprista chevaNikoraiti, kuti chakatanga sei pakutanga muEfeso. Ndipo pakakundikana nguva yekereke mumakore mazana matatu ekurarama kwayo. Isati yaparara, vaNikoraiti vakatanga imwe dzidziso, chiprista chehama .... vakatanga kuronga chiprista. Kubva ipapo dzakava “tsika,” zvavaiita, vachiita zvinhu izvi zvekureurura, nezvimwe zvakadaro. Yakava dzidziso pano, ikapinda muBabironi, ikaguma yava pano, panguva yekupedzisira, maKristu ese akamonerwa pairi; kaboka kaduku ndiko kachasara kachaponeswa kubva pairi.
60-1205 Nguva yekereke yeEfeso.
Zvino mapere aPauro akava “vaNikoraiti.” vaiedza kuita chiprista sechevaRevi, chaive chehutorwa kudzidziso dzeTestamente Itsva. Amen! Shoko rekuti Nicko, shoko rechiGiriki rekuti Nicko rinoreva kuti “kupamba, kukurira”. Kukurira chii? Sangano, Mweya Mutsvene.
MuTestamente Itsva tese tiri vaprista. Hakuna munhu ari pamusoro pemuprista, kunze kweMuprista Mukuru Jesu.
1 Petro 2:9 …. Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa,vuprista bwamambo, ....
Mwari anoda kuti kereke yake ivakwe sei?
VaEfeso 2:20 Makavakwa pamusoro penheyo dzavaapostora navaprofita, Kristu Jesu amene ari ibwe rapakona.
21 Maari imba yose yakasonganiswa kwazvo, inokura , ive tembere tsvene munaShe.
Testamente Yekare yakarukirirwa muTestamente Itsva kuti inongedze kukosha kwaJesu Kristu.
2 Petro 3:2 Kuti mugorangarira mashoko akataurwa kare navaprofita vatsvene, nomurairo waShe, Muponesi, wamakapiwa navaapostora venyu;
Muzvikamu zvedzidziso tinofanira kuenderana nemaprofita vakanyora Testamente yekare, nevapostora vakanyora Testamente Itsva.
Judasi 1:17 Asi imi vadikanwa, rangarirai mashoko akadeya kutaurwa navaapostora vaShe wedu, Jesu Kristu;
VaEfeso 4:11 Zvino wakapa vamwe kuti vave vaapostora, vamwe vaprofita, vamwe vaevangeri, vamwe vafudzi navadzidzisi;
Iri ndiro rega vhesi muBhaibheri rese rinotaura izvi. Saka tinofanira kungwarira kuti tinozviturikira sei.
Nhasi, kereke imwe neimwe inomhanya kunongedza vanhu vashanu pazvinzvimbo izvi, voisa pasita akanyorwa muBhaibheri kuti mufudzi watinodaidza zvakare kuti mufundisi kuti ave pamusoro pavo vose. Asi kereke yekutanga yakaita zvinhu nenzira iyi here? Kereke yekutanga ndiyo muenzaniso wechokwadi kwatiri.
Mateo 18:20 Nokuti apo pakaungana vaviri kana vatatu muzita rangu ndiri’po pakati pavo.
Saka vanhu vaviri kana vatatu vanoita kereke yakakwanira Mwari. Asi vanokwanisa kushaiwa hushumiri hushanu hwese panzvimbo.
Ngationgororei chirevo chevhesi iri rinotaura pamusoro pehushumiri hushanu.
12 Kuti vatsvene vakwanisirwe basa ravo rokushumira, nerokuvaka muviri waKrustu.
Hushumiri hushanu hunokwanisira maKristu. Ibasa gurusa.
2 Timotio 3:16 Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari, runobatsira pakudzidzisa, nokuraira, nokururamisa, nokuranga kuri mukururama.
17 Kuti munhu waMwari akwane, agadzirirwa kwazvo mabasa ose akanaka.
Kukwanira kunoyananiswa nekutenda uye kukohwa kubva paMagwaro ose. Saka hushumiri hushanu hunofanira kugona kushandisa Magwaro ese.
“Nerokuvaka muviri waKristu:” Hushumiri hushanu hunofanira kuvaka kana kunatsa muviri wese wemaKristu zvisinei nekuti vanouya pamisangano yenyu here kana kuti kwete. Zvisinei nekuti vanoenda “kereke” ipi. Hushumiri uhwu hunofanira kubata kereke yese mukati memakore ayo 2000 ese enhorondo yekurarama kwayo, pasi rese. Nhasi kune masangano 45000 emakereke akasiyana. Ese akasiyana asi ese anoti anogona ane chokwadi chese. Pane chakakanganisika zvakanyanya. Hakuchina humwechete zvachose mukutenda. Makereke anotevera vanhu vanovatungamirira, achipikisana, uye vapatsanurana sechivoni-voni chakatsemuka.
VaEfeso 4:13 Kudzimara isu tose tisvike pavumwe bwokutenda nokuziva Mwanakomana waMwari, napamunhu wakura napachiyero chovukuru bwokuzara kwaKristu;
Tinowana kutenda kubva kuShoko rakanyorwa. Tinokwanisa kukwanisirwa kana tichitenda Magwaro. Tinofanira kuziva Shoko raMwari. Jesu ndiye Mwanakomana waMwari ndiye Shoko .
Kutenda kuShoko rakanyorwa patinokura pakunzwisisa Bhaibheri nekushandisa mavhesi aro ndiyo nzira yedu yekunoruramiswa.
Saka tinoda munhu anotidzidzisa Bhaibheri.
VaEfeso 4:14 Kuti tirege kuramba tichingova vacheche, tichizununguswa nokudzingwa nemhepo ipi neipi, yokudzidzisa nokunyengera kwavanhu, namano, kuti vatsause nokunyengera.
Tinoda mumwe munhu kuti atidzidzise dzidziso yeBhaibheri inobatanidza mavhesi eBhaibheri pamwechete. Dzidziso ine simba chete kana ichibva muBhaibheri. Kwete mazano emumwe munhu akangwara. Vanhu vakachenjera vanoshandura Shoko rakanyorwa vorasisa vanhu.
VaEfeso 4:15 Asi tireve zvokwadi murudo, tigokura maari pazvose, iye Krustu musoro;
Johane 17:17 Muvaite vatsvene muzvokwadi; shoko renyu izvokwadi.
Vashumiri vanofanira kuva nerudo rwechokwadi. Rudo rweShoko rakanyorwa. Nekuti Shoko ndiye Kristu.
Ichi chinhu chakakosha kwazvo. Vapostora, pavakatanga kereke, havana kubvira vaisa kereke pasi pehutongi hwemunhu mumwechete. Kwaive nevadzidzi gumi nevaviri kuti vagovane hutungamiri. Kwaive nevarume vasere vakanyora Testamente Itsva. Hutungamiri chaingova chinhu chaibatsiranwa nevakawanda. Hakuna munhu mumwechete aive musoro wechero kereke. Kristu chete ndiye Musoro uye Mutungamiri wekereke. Tinofanira kuterera iye chete. Ndiye Shoko. Saka tinofanira kuterera Shoko chete.
VaEfeso 4:16 Muviri wose wakasonganiswa zvakanaka maari nokubatanidzwa nenhengo dzose dzinosimbisa mutezo mumwe nomumwe uchibata nechiyero chawo, kuti muviri ukuriswe pakuvakwa kwawo murudo.
Muviri wevatendi unotaura pamusoro pemaKristu ese. Kwete sangano rimwechete rekereke rinozviti riri nani kudarika mamwe. Nhengo imwe neimwe yemuviri ine simba rakasiyana neimwe uye chinangwa chakasiyana neimwe. Nhengo dzemuviri hadzitsvagi mvumo yekubata basa radzo kubva kune dzimwe. MaKristu haafaniri kutevedzera kana kuedza kurarama semumwe muKristu. Nhengo dzemuviri dzinongofanira kuzviwisira kuMusoro weMuviri, anova Kristu, Shoko.
VaEfeso 4:17 Naizvozvo ndinoreva nokupupura chinhu ichi munaShe, ndichiti, musaramba muchifamba savahedeni, vanofamba vo novupenzi bwokurangarira kwavo,
VaHedeni vakagara vari vanhu vasingatendi. Ndiko kuberekwa kwedu. Saka hatifaniri kuedza kubatira Mwari nenzira inotifadza isu uye inotidakadza. Kuita kwehunhu hwedu munezvechitendero hakuna maturo.
Marko 7:7 Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso, iri mirairo yavanhu.
8 … Munosiya mirairo yaMwari muchichengeta tsika dzavanhu.
Hatifaniri kuzviitira nzira yekunamata inotiitira isu. Tinofanira kuterera zvinotaurwa neBhaibheri chete. Hatifaniri kusika Mwari mumifananidzo yedu. Hatifaniri kuisa zvatinoda nezvatisingade muShoko raMwari.
VaEfeso 4:18 Vakasvibirwa pakunzwisisa kwavo, vari vatorwa pavupenyu bwaMwari, nokuda kwokusaziva kuri mukati mavo, nokuda kwovukukutu bwomwoyo yavo.
Mwari anotaura kuti kereke yekupedzisira, kereke yeRaodikia, ibofu. Hatitsigiri kutenda kwedu neBhaibheri.
MaKristu anotevera zvido zvevamwe vanhu vanotungamirira saka nekudaro havatsvagi Magwaro saka vanoguma vasina zvizhinji zvavanoziva muBhaibheri. Kusaziva Magwaro kwaita kuti maKristu asare asina chaanoziva muBhaibheri. Nei Jesu akanyora kaviri muvhu paida kutakwa mukadzi mutadzi nemaJuda? MaKristu anongozunguza mapendekete avo vofuratira kusaziva kwavo pamusoro penyaya iyi. Jesu akabvunza vadzidzi vake kuti nei vaive vasinganzwisisi pamusoro pematengu gumi nemaviri uye matengu manomwe ezvakasaririra paakapa zviuru zvevanhu chekudya. Nhasi maKristu vanongozunza mapendekete avo vofuratira nyaya iyi. Kusaziva zvinhu kwakura kwazvo mukereke. Tozvinetserei? Zvine basa rei? Hazvina kukosha.
Chero muparidzi anokuudzai kuti mufuratire Magwaro nekuti iye haamanzwisisi, anenge achivhariridzira kusaziva kwake asingakubatsirei parudo rwenyu rwekururamiswa.
Kana musingagoni kudaira mibvunzo yakakosha iyi muBhaibheri, zvinoreva kuti muri mapofu nekuti kana mukatarisa mavhesi eBhaibheri hamuna chiedza chamunoona maari. Bhaibheri chiedza. Saka kana tikatarisa Magwaro tikati, “Handizivi zvaanoreva”, zvino kwamuri Bhaibheri harisi chiedza (kunova kunyepa) nekuti tinoti Bhaibheri harisi kuratidzira chero chinhu pamusoro pazvo saka zvinoita kuti tifuratire Gwaro iroro, kana kuti (zvinova zvechokwadi), tinenge tichingogamuchira kuti tiri mapofu kwazvo zvekuti hatigoni kuona Chiedza cheShoko raMwari.
Hushumiri hushanu hunofanira kutibatsira kuti titungamirirwe neMagwaro. Saka hushumiri uhwu huripi munguva yekupedzisira yemapofu yekereke yeRaodikia isingazivi kuti haioni?
Zvakazarurwa 3:17 Nokuti unoti ndakafuma, ndakafumiswa, handishaiwi chinhu; usingazivi, kuti ndiwe unovurombo nenhamo, uri murombo nebofu usine-chokufuka.
Boka rimwe nerimwe rekereke rinoti harishaiwi chiro. Havadi kugadziriswa nevanobva kunze kweboka ravo. Vatungamiri vemakereke avo vanovapa hutungamiri hwese uye ruzivo rwese rwavanoda.
Asi tarirai kuti Bhaibheri rinotii pamusoro pevasikana vakachenjera, maKristu akazadzwa neMweya.
Mateo 25:4 Asi vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo yavo nemwenje yavo.
5 Zvino chikomba chakati chichinonoka, vakakotsira vose, vakavata.
6 Pakati povusiku vakanzwa mhere-mhere: Chikomba chovuya! Budai mumuchingamidzei!
Vasikana vose vakachenjera vakavata nhasi uno.
Makereke ese anoramba izvi pamusoro pawo, vanoti vakamuka mamwe makereke ndiwo akarara.
Uyu ndiwo moyo wenyaya. Ndivo vakuru vemakereke, vanodaidzwa kuti “hushumiri hwemabasa mashanu’ hwakatora kutonga pamusoro pekereke, vari kuita kuti kereke igare irere. Mufananidzo wevasikana vakachenjera vakavata unotaura kuti vakachenjera vose, maKristu akazadzwa neMweya vane mafuta mumwenje yavo vakavata vakakotsira. Asi hakuna kereke inoda kubvuma izvi pamusoro payo. Saka nekudaro vatungamiri vemakereke vari kutaura kuti Bhaibheri rinoreva nhema. Vatungamiri vemakereke anhasi havagoni kugamuchira Chiedza chemifananidzo yakashandiswa naJesu achidzidzisa nekuti inovamhura. Kutadza kuona Chiedza zvinoreva kuti mapofu havaoni.
Ndiko kupupupura kwehunyengeri. Vatungamiri vemakereke vanhasi vakakunda pakuita kuti vatendi vose vakachenjera, vakazadzwa neMweya vagare vakakotsira. MaKristu mamwechete akazadzwa nemweya aya vanofara kufuratira nekurwisa mavhesi ese eBhaibheri avasinganzwisisi. Isai chiedza kumaziso emunhu akakotsira anokuudza kuti ubve kwaari umusiye arare. Ndizvo zvinoitwa nenhengo dzekereke kana dzakatarisana nemavhesi eBhaibheri avasinganzwisisi.
Johane Mubapatidzi naJesu havana kubvira vataura chinhu chaive nehunyoro kuvatungamiri vechitendero vechiJuda.
Kuipa kuzhinji kuri muhutungamiri hwekereke.
MaKristu ese anoti vari pakati pevasikana vashanu vakachenjera vanomirira Chikomba. Asi vanofuratira kana kungosiyirira pachikamu chekuti vasikana vashanu vakachenjera ivavo vaive vakakotsira zvakare. Vanoramba ruGwaro runotaura izvozvo.
Kana kuti vanoziva kuti kuchema kuchavamutsa kuchava chii, vose vakachenjera uye vakapusa.
Kereke imwe neimwe inoti mutumgamiri wayo akaimutsa mamwe makereke ndiwo achiri akavata. Asi mhere-mhere ndiyo iri kufanira kumutsa vose nguva imwechete, vose vakachenjera nevakapusa. Izvi hazvisati zvamboitika nekuti makereke ese vachiri kuenderera mberi nenzira dzavo voga dzavakasarudza.
Asi mhere-mhere haina kubva pakati pevasikana vane gumi. Vaive vakakotsira vose. Saka mhere-mhere ichabva kunze kwemakereke ese. Mhere-mhere haina kubva kune mumwe muparidzi akambovako. Mhere-mhere yakaitika pakupedzisira chaipo, pakati povusiku, panonyatsonaka hope. Mhere-mhere iyi chimbori chii? Munoziva here kana kuti muri mapofu zvakare panyaya iyi?
Billy Graham, akapikisana nemuvangeri mukuru wesenturi yakadarika, akati kana Ishe akatora kereke yake nhasi mangwana zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvinoitwa mukereke zvinenge zvichienderera mberi zvisina chinozvikanganisa. Chinhu chinotyisa pakutukwa kwekereke yanhasi .
MaKristu anobvuma kuti tiri munguva yekupedzisira, asi vanoramba kuti ivo chikamu chekereke yeRaodikia- kereke yekupedzisira isingavoni mapofu. Hakuna boka rekereke rinoda kubvuma kuti mapofu. Asi Kristu, Musoro kana Mutungamiri wechokwadi akamira kunze kwemukova wekereke yeRaodikia. Hakuna rusarura rwakaitwa apa, makereke ese.
Saka chero munhu ari mukati mekereke, anozviti musoro kana mutungamiri wekereke, musoro wenhema.
Nhasi pasita ndiye ari kuzviidza musoro wekereke.
Kutaura kuti pasita ndiye musoro wekereke hazvisi muMagwaro zvachose.
Saka Bhaibheri rinotii pamusoro pehutungamiri hwekereke hwakakodzera?
Ngatitangei nekutarisa pasita watinodaidza kuti mufundisi akadaidzwawo muBhaibheri kuti mufudzi.
Bhaibheri rinotii pamusoro papasita (mufudzi)?
Iri ndiro rega vhesi muTestamente Itsva yese rinotaura pamusoro pemufudzi anomiririra pasita (ndapota tarirai Bhaibheri redu reShona rinoshandisa shoko rimwechete rekuti mufudzi kureva shepadhi uye mufudzi kureva pasita).
Rinomuisa pachinzvimbo chechina pachikwata chehushumiri hushanu. Izvi zvinomupa simba rekutungamirira here? Kwete zvachose.
“Pasita kana mufundisi ndiye musoro wekereke”. Bhaibheri haritauri izvozvo.
“Mari yechegumi ndeyapasita”. Bhaibheri haritauri izvozvo.
“Pasita kana mufundisi achazivisa zvakavanzika zveMagwaro”. Bhaibheri haritauri izvozvo.
“Teverai pasita wenyu nekuti achakuyambutsai”. Bhaibheri haritauri izvozvo.
“Hamugoni kurarama muri pamusoro papasita wenyu kana kuziva zvinodarika iye”. Bhaibheri haritauri zvakadaro.
Saka kukoshesa kunoitwa nekereke kusimudzira pasita kumuisa pachinzvimbo chekutungamirira kereke kwakaipa.
Ngatitarisei kuita kwevafudzi (mapasita) kubva kuTestamente Yekare.
Mufudzi anomiririra pasita akataurwa kasere, asi akatukwawo kanomwe.
Uhu hahungave hushumiri hunofadza Mwari. Jesu haana kubvira afadzwa nevatungamiri vezvitendero vechiJuda. Hutungamiri hwekereke inyaya ine matambudziko zvakanyanya.
Jeremia 3:15 Ndichakupai vafudzi vanofadza mwoyo wangu, uchakufudzai nezivo nenjere.
Ndiro rega vhesi muTestamente Yekare rinoyemura nekutaura zvakanaka pamusoro pemufudzi anomiririra pasita. Asi kana chete ari neruzivo rweBhaibheri uye achigona kuyananisa mavhesi eBhaibheri pamwechete nekuanzwisisa.
Jeremia 2:8 Vaprista havana kuti: JEHOVA uripiko? Vaifambisa mirairo vakanga vasingandizivi, vafudzi vaindidarikira, vaprofita vaiprofitera Baari, vachitevera zvinhu zvisingabatsiri.
Jeremia 10:21 Nokuti vafudzi vava vasinenjere, havana-kubvunza JEHOVA; naizvozvo havana kuzofara, namapoka avo ose akaparara.
Kuisa munhu pahutungamiriri hwekereke zvinoreva kuti anozomira kuona kuda kwaMwari. Anozoisa mifungo yake pamusoro pekereke. Vanomupikisa vanobva vadzingirwa kunze.
Jeremia 12:10 Vafudzi vazhinji vakaparadza munda wangu wemizambiringa, vakatsika mugove wangu namakumbo avo, vakaita mugove wangu unodikanwa uve renje risine chinhu.
Mapasita kana vafudzi vanobva paMagwaro vachitevera zvakataurwa nevanhu. Vanhu vanovatevera vanobva vaziva Magwaro mashoma kwazvo. Kurumbidza pasita ikiyi yekuti munhu atambirike musangano rake. Sangano rake rinotanga kusaziva Bhaibheri, vachitadza kutsigira zvavanotenda mazviri neBhaibheri. Vanhu vazhinji vanorwisa Magwaro anorwisa zvavanotenda.
Jeremia 17:16 Kana ndirini, handina-kukurumidza kusakuteverai somufudzi,
Tarisai, kuva pasita zvinoreva kuti haachatevera Mwari. Kuva mutungamiri wevanhu vazhinji kana sangano hakukurudziri vanhu kutevera Mwari. Kuva pasita anotungamirira sangano zvinoreva kuti haasi kutevera Shoko raMwari. Bhaibheri harina kubvira rataura kuti pasita anotungamirira. Mapasita anofanira kubva pakuva vatungamiri vekereke kana vachida kutevera Mwari. Asi mari yavanowana inovanyengera kwazvo, saka havana kwavanenge vachimhanyira kubva pahutungamiriri kuti vatange kutevera Mwari.
Jeremia 22:22 Mhepo ichaparadza vafudzi vako vose;
Mhepo dzinotaura pamusoro pehondo nenhamo. Kurwa nevaya vanoda kutevera Magwaro nguva dzose, mapasita anorwisa kuti vagare vari nesimba uye kuti mafungiro avo ashande pamusoro pesangano. Chinenge chichirwirwa ndiyo mari yavanowana kubva kusangano ravanotonga. Vanhu vasinganzwanani nemafungiro apasita havatambirwi mukereke. Mune nhamo huru mukupikisana napasita.
Jeremia 23:1 Vanenhamo vafudzi vanoparadza nokuparadzira makwai amafuro angu! Ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Kupikisa pasita zvinoreva kuti unenge uchifanira kubva kusangano rake.
Jeremia 23:2 Naizvozvo zvanzi naJEHOVA, Mwari waIsraeri, pamusoro pavafudzi vanofudza vanhu vangu: Makaparadzira makwai angu, mukaadzinga, mukasaatarira; tarirai ndichakurovai nekuda kwezvakaipa zvemabasa enyu ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Iyi haisi mbiri yakanaka. Mwari haafadzwi zvakanyanya nemapasita.
Mwari akataura nezvavo kamwechete muTestamente Itsva.
Uku ndiko kurongwa kwakaitwa vanhu nekukosha kwavo, pekutanga vapostora, pechipiri vaprofita, pechitatu vadzidzisi. Kwozotevera humwe hushumiri hwese mukereke.
1 VaKorinte 12:28 Mwari wakaisa vamwe pakereke, pakutanga vaapostora, rwechipiri vaprofita, rwechitatu vadzidzisi, tevere vaiti vemabasa esimba, tevere zvipo zvekuporesa, navabatsiri, navabati, namarudzi mazhinji endimi.
Tarirai hapana kutaurwa pamusoro papasita kana mufudzi.
Chinokosheswa apa kuita dzidziso yakasimba.
Zviitiko zvemukereke hazvina maturo kunze kwekunge zvinodzidziswa zviri zvechokwadi.
Vapostora vakatanga kudaidzwa naJesu.
Ruka 6:13 Zvino kwakati kwaedza, akadana vadzidzi vake, akatsanangura kwavari vanegumi navaviri, vaakatumidza zita rekuti vaapostora.
Mabasa 2:42 Vakatsungirira pakudzidzisa kwavaapostora
Vaapostora vakanyora dzidziso yakakosha kuti kereke idzidze kubva kwairi.
Mabasa 15:6 Ipapo vaapostora navakuru vakavungana kuti varangane pamusoro peshoko iri.
Mabasa 16:4 Vakafamba namaguta, vakavapa zvirevo zvakatemwa navaapostora navakuru vapaJerusarema, kuti vazvichengete.
5 Naizvozvo kereke dzakasimbiswa pakutenda, dzikawanda pakuverengwa kwadzo zuva rimwe nerimwe.
Nekutenda kune zvakanyorwa nevapostora, yakazova Testamente yedu Itsva, kereke yekutanga yakatangwa.
2 VaKorinte 12:12 Zvirokwazvo zviratidzo zvomuapostora zvakaitwa pakati penyu nokutsungirira kukuru, nezviratidzo nezvishamiso namabasa esimba.
Varume vaidaidzwa kuti vaapostora vakaita zviratidzo zvikuru zvemweya uye zvishamiso kuti kudanwa kwavo kuonekwe.
Zvakazarurwa 2:2 Ndinoziva mabasa ako, nokutambudzika kwako, nokutsungirira kwako, uye kuti haudi kuvonana navanhu vakaipa; wakavaidza ivo vanoti, tiri vaapostora, , vasi ivo chaivo, ukavawana vari venhema.
Vamwe vakaedza kuzviidza vaapostora. Asi kereke yekutanga yaitenda chete kuTestamente Itsva yakanyorwa nevapostora vekutanga. Kana ukasataura zvakataurwa nevapostora vekutanga, waive murevi wenhema. Saka muzvikamu zvedzidziso, vanhu vakazotevera vachizviidza vaapostora vaive vasingatambirwi. Dzidziso imwechete yaireva chinhu yaive iyo yakanyorwa nevaapostora vekutanga.
Mamishinari mazhinji aidaidzwa kuti mapostora munguva yemamishinari. Asi vaive vasina chekutaura pamusoro pedzidziso. Vaitaura chete zvakanyorwa nemapostora ekutanga. Paipokana mamishinari neBhaibheri, mamishinari aitotadza.
Zvakazarurwa 21:14 Rusvingo rweguta rwakanga rwunenheyo dzinegumi nembiri; napamusoro padzo mazita avaapostora vanegumi navaviri veGwaiana.
Guta guru dzvene raive rakasimbisa kuti vaapostora vaive ndivo nheyo dzechokwadi chaisazoshandurwa.
21 Maari imba yese yakasonganiswa kwazvo, inokura, ive Tembere tsvene munaShe.
Vaapostora vakanyora Testamente Itsva. Vaprofita vakanyora Testamente Yekare. Apa ndipo pakavambwa chokwadi. Nheyo dzaive dzateiwa kare. Kereke yaive yavakwa padziri kwemakore 2000 enhorondo yekereke. Vaapostora nevaprofita havasi hushumiri hwechimanje-manje hunoshandura Magwaro.
Munhu anokwanisa kuita chipo chechiprofita. Asi handidzo nheyo dzekereke. Shoko rakanyorwa nemaprofita eTestamente Yekare ndiro nheyo dzezvatinotenda.
Matombo makuru akasimba anoiswa pakutanga panheyo kuti dzisimbe kuitira kuti kurema kwechivakwa chese kuzorore paari. Hatigoni kutiza kubva panheyo dzakateiwa kare. Tinokwanisa chete kuvakira pamusoro peMagwaro iwayo.
1 VaKorinte 3:10 Nenyasha dzaMwari dzandakapiwa, ndakaronga nheyo semuvaki wakachenjera; mumwe unovaka pamusoro padzo. Zvino umwe nomumwe ngaachenjere kuti unovaka sei pmusoro padzo.
11 Nokuti hakunomumwe ungaronga dzimwe nheyo, asi idzo dzakarongwa kare, ndiye Jesu Kristu.
Pauro akaita nheyo dzenguva nomwe dzemakereke.
Vanhu vanotungamirira vaizobva panheyo dzakaitwa naPauro voisa kereke muNguva yeRima. Zvino vamutsiridzi vaizotanga kudzosa kereke kunheyo dzeMagwaro dzakaitwa naPauro.
Mika 5:5 Iye uchava rugare rwedu. Kana muAsiria achipinda munyika yedu, kana achitsika mudzimba dzedu dzovushe, tichamutsa vafudzi vanomwe namachinda masere pakati pavanhu kuti varwe naye.
Varume vakuru vasere vaive varume vakanyora Testamente Itsva.
Vafudzi vanomwe ndivo vatumwa kumakereke manomwe vakakurudzira nguva dzemakereke avakararama kuti vanhu vadzoke padyo neMagwaro.
1 Petro 2:5 Nemi vo, samabwe mapenyu, muvakwe muve imba yoMweya, muve vuprista vutsvene, kuti mubaire zvibairo zvoMweya, zvinofadza Mwari nokuda kwaJesu Kristu.
Kune mabasa makuru matatu anoitwa kana pachivakwa nemabwe.
Pekutanga, kutema dombo kubva mugomo. Ndiro basa revavangeri. Dombo “rakaponeswa” rakakwasharara asi ratotangwa.
Pechipiri, dombo rinofanira kutemwa rokwenenzverwa rovezwa. Ndiro basa remufudzi. Rudo rwehufudzi. Kubatsira vakatendeuka vatsva kuti vagone kurarama nekukunda matambudziko avanosangana nawo nekuvadzidzisa zvakakosha muchiKristu kuti vatende muna Mwari uye vararame hupenyu huri nani uye hutsvene. Uyu ndiwo mukaka weEvangeri. Vanofanira kukurudzirwa kuti vatende muBhaibheri uye kuti vatsvage Mwari kusvikira vabapatidzwa neMweya Mutsvene,
Pechitatu, dombo rakavezwa rinenge rakufanira kuwana nzvimbo yaro muchivakwa cheTembere yaMwari yemweya kuti vadzidze dzidziso dzakadzama uye kuti vagone kuzosvika panyama yeEvangeri.
Saka ngatitarisei pahushumiri hushanu.
Kune hushumiri hutatu chete kana tasvika pakudyara chokwadi chedzidziso dzeBhaibheri.
Uku ndiko kurongeka kunoita dzidziso yakanaka. Budai muhurongwa uhu munobva makanya zvinhu zvose.
Pekutanga, vaapostora vakanyora Testamente Itsva vakatanga dzidziso yeEvangeri reNyasha. Hakuna anokwanisa kushandura Testamente Itsva nechero nzira.
Pechipiri, kune imwe nheyo yechokwadi. Vaprofita vakamiririra Testamente Yekare vakatanga kutsanangura mumvuri waizouya uchipinda Testamente Itsva.
Asi kune hushumiri hwechiprofita humwechete hwakasarudzika hunofanira kuzivisa zvakavanzika zvakavanzwa zvaMagwaro nekuzivisa Zvisimbiso zvitanhatu zvezvisimbiso zvinomwe kuti tigone kufukunyura zvakavanzika zvaive zvakasimbiswa muBhaibheri. Chisimbiso chechinomwe chinomiririra Kuuya kwaShe zviri pachena kuti chinoramba chiri chakavanzika. Hakuna anoziva kuti anouya rini.
Zvakazarurwa 10:7 Asi namazuva enzwi romutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidzira varanda vake ivo vaprofita.
Asi chakavanzika ichi chinouya pechipiri nekuti muprofita wenguva yekupedzisira haagoni kuuya nedzidziso itsva, anofanira kudzorera kereke yekupedzisira yechinomwe kune zvaitendwa nemadzibaba mapostora munguva yekereke yekutanga.
Zvakazarurwa 22:9 Akati kwandiri, rega kudaro; ndiri muranda pamwe chete newe, nehama dzako, vaprofita, navanochengeta mashoko ebhuku iyi; namata Mwari.
Tarirai muprofita mukuru uyu akazivisa zvinhu izvi zvose kuna Johane aive akangwarira kuti achengetedze zvese zvakanyorwa muBhaibheri. Johane aive zvese muprofita uye muapostora. Asi hapana kana imwe yezaruriro dzaakapa yakarwisa zvaive zvanyorwa kare muBhaibheri.
6 Iye uchadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana, nemoyo yevana kunamadzibaba avo, kuti ndirege kuvuya ndirove nyika nokutuka.
Johane Mubapatidzi akadzorera madzibaba kuvana, Jesu nemaapostora. Vadzidzi vake vakazokura kuva madzibaba maapostora enguva yekereke yekutanga. Isu tiri vana vaduku munguva yekupedzisira vanofanira kudzorerwa pakutenda kwemadzibaba mapostora ekutanga.
“Vaprofita” (vazhinji) kwaive kutaura pamusoro pemaprofita akaita saMosesi vakanyora Testamente Yekare.
Marko 1:2 Sezvazvakanyorwa mumuprofita Isaya zvichinzi: Tarira ndinotuma munyai wangu pamberi pako, uchakunatsira nzira yako.
Mateo 22:37 Akati kwaari: Ida Ishe, Mwari wako, nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose.
39 Wechipiri unofanana nawo ndiwoyo: Ida wokwako sezvaunozvida iwe.
40 Murairo wose navaprofita zvakabatanidzwa pamirairo iyi miviri.
Mateo 26:56 Asi izvi zvose zvaitwa kuti magwaro avaprofita aitike. Zvino vadzidzi vose vakamusiya vakatiza.
Kune vaprofita vepanzvimbo vane zvipo zvekuprofita kuti vakurudzire kereke panguva yavo. Asi maprofita aya haana chaanotaura pamusoro pedzidziso. Maprofita ekutanga chete ndiwo ane chekuita nedzidziso.
Mabasa 11:27 Namazuva iwayo vaprofita vakaburuka vachibva Jerusarema, vakaenda Antiokia.
28 Mumwe wavo ainzi Agabo, akasimuka ndokuvazivisa noMweya kuti nzara huru ichava’po panyika yose, iyo ikasvika panguva yaKraudio.
Mabasa 13:1 Zvino pakereke yepaAntiokia paiva navaprofita navadzidzisi, vaiti: Barnabasi naSimeoni, wainzi Nigeri, naRukio weKurini, naManaeni wakanga arerwa pamwe chete naHerode mubati, naSauro.
Mabasa 15:32 Judasi naSirasi, vaive vaprofita vamene, vakavaraidza hama namashoko mazhinji nokuvasimbisa.
Chikamu chechitatu vadzidzisi.
Ava vane hushumiri hwakasarudzika hunobatanidza Testamente Yekare neTestamente Itsva. Vanofanira kuita dzidziso nekuitora kubva muBhaibheri pavanoyananisa mavhesi akasiyana siyana pamwechete. Kutsvaga dzidziso kubva muBhaibheri inotangira kuna Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa ichi chipo chakasarudzika kwazvo.
2 Timotio 4:3 Nokuti nguva ichasvika yavacharamba kutendera dzidziso yakarurama, asi, vachida kufadzwa panzeve dzavo, vachazvivunganidzira vadzidzisi pakuchiva kwavo.
4 Vachifuratidza nzeve dzavo pazvokwadi, vachitsaukira kungano.
Mapasita vanoita dzidziso dzavo vega dzisiri muBhaibheri dzinononga nekusarudza Magwaro mashomanana. Havagoni kutevera zvitendero zvavo kubva kwakatangira Bhaibheri kusvika kwarakaperera, uye vanodzingira kure chero mudzidzisi anokwanisa kuvapikisa achishandisa Magwaro.
Vadzidzisi venhema vanova nembiri nekuzviwisira kudzidziso dzakaipa dzemapasita kana vafundisi, vachiudza vanhu zvavanoda kunzwa.
VaHeberu 5:12 Nokuti, kunyange maifanira kuva vadzidzisi zvino, kana tichitarira nguva, mofanira zve kuti muve nomumwe unokudzidzisai dzidzo dzokutanga dzokuvamba kwezvirevo zvaMwari; mava vanhu vanofanira kupiwa zve mukaka, vasingapiwe zvekudya zvikukutu.
Vanhu vaita mbiri nekudzokorora zvakataurwa nevatungamiriri vemakereke. Kukoshesa Bhaibheri kwakushoma kwazvo zvekuti maKristu vakutambudzika chero kutsigira dzidziso dzakareruka chaidzo neBhaibheri. Kusaziva Bhaibheri rave dambudziko guru mumakereke.
Kudzidzisa kunogoneka chete kana mavhesi eBhaibheri akabatanidzwa pamwechete. Zvimwe zvese zvinenge zviri mifungo yevanhu kunova kutambisa nguva, kunyange zvichinzwika kunge zvakachenjera.
Mateo 28:19 Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, muvabapatidze muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene;
20 Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai imi; tarirai ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika.
Jesu akashandisa izwi rekuti “mudzidzise” muvhesi rakatevera akati “muvadzidzise”. Uku kukoshesa kudzidzisa kwakanyanya, zvinoratidza kuti zviri nyore sei kuti dzidziso ikanganiswe. Magwaro ose anofanira kukosheswa. Hakuna gwaro rinofanira kusiiwa nekuda kwekuti harikwani kumafungiro edu. Hazvichashamisa kuti nei kuine makereke 45000 akasiyana nemandudzi emavhezheni anodarika zana emaBhaibheri. Zviri nyore kwazvo kurasika pakadaro.
Kudzidzisa kwakataurwa kubapatidza kusati kwataurwa nekuti kwakakosha. Kana mukavadzidzisa zvisizvo, vanobapatidzwa zvisiriizvo zvakare vobuditswa muMwenga waKristu, vova chikamu chevasikana vakaponeswa asi vakapusa kubva pakutanga kwavo. Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene mazita ezvinzvimbo. Hapana Zita pakati pawo. Saka Zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene nderekutii? Kana Mwari ari mitumbi mitatu yatinoti Tiriniti yeVanhu vatatu, anenge asina Zita. Hakungawanikwe zita rimwechete reVanhu vatatu.
Mabasa 2:38 Petro akati kwavari: tendevukai mumwe nomumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Saka Zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene ndiJesu Kristu.
Zaruriro iyi inoda kuti tizive kuzara kwovuMwari. Saka kudzidzisa kwakasimba kunobata nhanho imwe neimwe takatarisana naMwari.
Zvinhu zvinotevera ndizvo zvinowanzosimbisa vatendi mukutenda.
Ruponeso runotangira muTestamente Itsva yakanyorwa nevaapostora. Vaprofita vanomiririra kunyorwa kweTestamente yekare. Zviprofita zveTestamente Yekare zvinozivisa Jesu saMessiasi. Vavangeri vakabva vatanga basa nekunyanya kutarisana nekurwisa kutadza zvinosika rudo rwekutendeuka nekuregerera.
Mapasita kana vafundisi vanobata parudo rwehufudzi apo vanotora vatendi vatsva mukati memukaka weEvangeri kuti vasimbise kutenda kwavo muMagwaro kuti munhu iyeye aenderere mberi kupfurikidza hutsvene kusvika parubapatidzo rweMweya Mutsvene.
Vadzidzisi vanobva vazogona kuisa munhu iyeye muhurongwa hukuru kwaMwari munguva yavo.
Uhu hurongwa hwakakosha pakuzivisa chokwadi cheBhaibheri humwe hushumiri hwese husati hwatanga kubata basa pakereke. Kuita humwe hushumiri hwese huchibata basa apo kereke inenge ichitevera dzidziso isiyo hazvibatsiri, sezvo vanhu havazova vakagadzirira Kuuya kwaShe sezvo vanenge vapedzera nguva yavo mukutadza.